Manantena ny hanao lisitra an'i Hebrona ho toy ny toerana lovan'ny UNESCO ny Palestiniana
Home » Travel Associations News » Manantena ny hanao lisitra an'i Hebrona ho toy ny toerana lovan'ny UNESCO ny Palestiniana
Ao anatin'ny ezak'izy ireo hahazoana fanohanana iraisampirenena ho an'ny fanjakana Palestiniana mahaleo tena ao amin'ny Banky Andrefana, ny Làlan'i Gaza ary i East East Jerusalem, ny Palestiniana dia nanao antso tamin'ny Fikambanana ONU, Fanabeazana, siantifika ary kolontsaina (UNESCO) an'ny ONU mba hiarovana ny tanàna taloha any Hebrona amin'ny Israel avy amin'ny fanaovana azy ho tranonkala lova manerantany. Tokony hifidy momba izany ny UNESCO amin'ny herinandro ambony, ary i Israel, izay manohitra fatratra ny hetsika, dia manery ny hisian'ny latsa-bato miafina.
Tany am-piandohan'ity volana ity dia nanakana ny ekipan'ny UNESCO tsy hitsidika ny tanàna i Israel, izay misy mponina jiosy 800 eo ho eo monina eo amin'ny Palestiniana 100,000 XNUMX. Ao afovoan-tanàna taloha no misy ny fasana nentim-paharazana an'i Abraham, izay antsoin'ny Palestiniana hoe moskah Ibrahimi, ary ny jiosy, ny fasan'ny patriarika. I Hebron amin'ny ankapobeny, ary ny toerana ara-pinoana manokana, dia efa fijanonan'ny herisetra israeliana-palestiniana hatrizay.
Israel dia manery ny UNESCO hanao vato miafina fa tsy ny vato misokatra nentim-paharazana, satria mino izy ireo fa amin'ny fifidianana malalaka dia hifidy ny fanjakana 21 ho an'ny fangatahana Palestiniana. Na dia tsy eken'ny Firenena Mikambana ho fanjakana ofisialy aza i "Palestine" dia manana ny toerany manokana amin'ny maha "mpanaramaso tsy miankina amin'ny fanjakana" azy ary afaka miditra amina vondrona UN toy ny UNESCO.
“Mpikambana ao amin'ny UNESCO i Palestine hatramin'ny 2011 ary zavatra mahazatra antsika ny mangataka amin'ny UNESCO mba hanao lisitra ireo toerana sarobidy aminay ho toerana Palestiniana ao amin'ny tranokalan'ny Lova Iraisam-pirenena.” Omar Abdallah, lehiben'ny departemantan'ny Firenena Mikambana ao amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Palestiniana dia nilaza tamin'ny The Media Line.
Nanazava i Abdallah fa tsy vao izao no nisakana ny iraka iraisampirenena tsy hiditra amin'ny faritany palestiniana.
"Tanjon'ny Isiraely ny hisorohana azy ireo tsy hahita ny fanitsakitsahana israeliana manohitra ny lova sy ny kolontsaina Palestiniana, saingy manokana sy tokana ity indray mitoraka ity," hoy izy.
Ny hany tanjon'ny fanekena ny tanàna taloha any Hebrona ho toerana Palestiniana dia ny hiarovana ny tanàna sy hanisy marika ny lanjan-tantara manerantany.
“Na inona na inona ifandraisan'ny antoko sy ny tanàna taloha any Hebrona, dia hita ao amin'ny faritany Palestiniana izy io ary tokony tanisaina mifanaraka amin'izany; manana ny lanjany manerantany izy io ary ho mora tratran'ny tsirairay. ” Nanampy i Abdallah.
Ao amin'ny Bokin'ny Jenezy dia voatanisa ao amin'ny toerana nanoratan'i Abraham - ilay mpanorina ny finoana tokana sy razamben'ny fivavahana jiosy sy Silamo - ny "Cave of Machpela" ho toerana fandevenana manokana ho an'i Sarah vadiny malalany.
"I Hebrio no fototry ny tantaram-pirenen'ny Jiosy, zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra sy ny fanajana ny ray aman-drenin'ny vahoaka jiosy izay nalevina tao telo arivo taona lasa izay," hoy i Yishai Fleischer, mpitondra tenin'ny Vondrom-piarahamonina jiosy tao Hebrona, tamin'ny The Tsipika Media.
Fleischer dia mihevitra ny UNESCO ho mitanila amin'i Israel, ary nilaza fa ny fanoratana ny toerana ho Palestiniana dia mitovy amin'ny fanapotehana ny lova jiosy. Tamin'ny volana lasa teo dia namoaka fehin-kevitra iray ny UNESCO izay nilaza fa tsy mitaky an'i Jerosalema ny Israel - hetsika izay nahatezitra ny Jiosy manerantany.
Nilaza i Fleischer fa tanàna mifangaro arabo-jiosy i Hebrona.
“Ny manampahefana palestiniana dia misy tapany eto, nefa koa misy tanàna jiosy eo akaikiny; Tsy hiantso ny faritra taloha ho faritra Palestiniana aho, ”hoy izy.
Nilaza ny Palestiniana fa i Hebelona dia toerana iray manan-danja Silamo.
"Hatramin'ny nisokafan'ny Silamo an'ireo tany ireo, ny Moskea Ibrahimi dia heverina ho toerana masina fahefatra ho an'ny Silamo aorian'ny Mekàka, ny Al-aqsa mosque (any Jerosalema) ary ny mosque Al-Nabwi (any Medina any Arabia Saodita)", Ismael Abu Alhalaweh , ny Tale Jeneralin'ny fanafiana masina ao Hebrona dia nilaza tamin'ny The Media Line.
Mivezivezy any Hebrona manerantany ny Silamo hivavaka, hoy izy, ary tandindomin-doza ny zon'ny israeliana.
"Israel dia nanodidina ny tanàna taloha tamin'ny teboka fanaraha-maso sy sakana," hoy izy. "Tsy maintsy mivavaka ny olona eo ambany fanaraha-mason'ny mpitandro ny filaminana mitam-piadiana israeliana, ary ny Palestiniana tsirairay avy dia tokony harahi-maso amin'ny lalana miditra sy mivoaka."
Tamin'ny taona 1994, nandritra ny volana masin'ny Ramadany - iray volana fifadian-kanina hanomezam-boninahitra ny fanambarana voalohany ny Quran ho an'i Muhammad araky ny finoana Silamo, dia nisy Jiosy nipetraka iray nitifitra mpivavaka silamo 29 tao amin'ny mosque nandritra ny fotoana nivavahany. Taorian'izay dia nozarain'i Isiraely ho faritra roa ny toerana masina - mosasà antsasaky ny sinagôga antsasaky ny vavahady samy hafa.
Nisy fandaharana ofisialy hizarana ilay tranonkala tamin'ny 1997 tamin'ny Jiosy sy ny Silamo izay samy nahazo ny fidirana irery tao amin'ilay tranonkala tamin'ny fialantsasatra ara-pinoana.
Iran Air A300-600 dia nanao fiantsonana vonjy maika tao amin'ny seranam-piaramanidina Tehran